ချည်ခင်စည်ပြေးဆွဲမှုမရှိစက်အကွေ့အကောက်များသော - တရုတ်ချည်ခင်စည်ပြေးဆွဲမှုမရှိစက်ပေးသွင်းအကွေ့အကောက်များသော,စက်ရုံ -FEIHU
ပြေးဆွဲမှုမရှိစက်နှစ်ဆချည်ခင်လွန်းသေတ္တာ, ကအကွေ့အကောက်များသောနိုင်ပါတယ် 2-3 Fiber မျှင်၏သက်တမ်းထပ်တိုး, ချည်မျှင်, သိုးမွှေးမျှင်, FDY, polyester မျှင်နှင့်စသည်တို့ကို, က TFO လိမ်စက်ပြင်ဆင်နေများအတွက် Tube bobbins အတူတက်ယူနိုင်ပါသည်, လည်း အသုံးပြု. ယက်လုပ်ခြင်းစက်များအတွက် conical Cone အတူတက်ယူနိုင်ပါသည်. ဒါဟာအမြင့်စွမ်းရည်၏အင်္ဂါရပ်ရှိပြီးကောင်းစွာယူ-up, ချောပုံသဏ္ဍာန်, လာမယ့်အပြောင်းအလဲနဲ့အလုပျအတှကျအလုပျသမားမြား၏ပြင်းထန်မှုသက်သာစေနိုင်ကြောင်းနိုင်ပါတယ်.
စက်နှစ်ဆချည်ခင်ကြိုပို့ Box ကို
Q1: ကျနော်တို့ 'နိုင်ငံတကာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မဟုတ်ပြန် \_, သငျသညျအပေါငျးတို့သ Logistic အရာကိုကိုင်တွယ်လိမ့်မယ်?
Q2: ဘယ်လောက်ကြာထုတ်လုပ်မှုများအတွက် ?
လွန်ခဲ့သော : အဘယ်သူမျှမ
နောက်တစ်ခု : မြားစှာသောချည်ခင်ကြိုပို့ Box ကိုစက်နှစ်ဆ